के यूरोकपको फाईनल होला त फेयर ? यी रेफ्रिले खेलाउँदैछन् फाईनल खेल | Samacharpati के यूरोकपको फाईनल होला त फेयर ? यी रेफ्रिले खेलाउँदैछन् फाईनल खेल – Samacharpati
१६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलका यस्ता खेलहरु पनि छन् जुन बिबादीत बनेका छन् । कतिपय खेलमा रेफ्रीको भुमीकाको बिषयलाई लिएर आलोचना समेत भएको छ । युरो कपको फाइनल खेल नेदरल्यान्ड्सका ४८ बर्षिया रेफ्री बियोर्न कुइपर्सले खेलाउने पक्का भएको छ ।
उनले अहिले सम्म फेयर गेम खेलाईरहेका छन् । युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएले फाइनलमा मुख्य रेफ्री कुइपर्स रहने जानकारी दिएको छ । कुइपर्सले यो सातौं पटक युरोपियन प्रतियोगिताको फाइनल खेल खेलाउन लागेका हुन् । सन् २०१४ को विश्वकपको समूह चरणमा इंग्ल्यान्ड र इटाली भिड्द कुइपर्स रेफ्री रहेका थिए ।
कुइपर्स सन् २००६ देखि रेफ्री गर्दै आईरहेका छन् ।यस अघि पनि उनले इंग्ल्यान्ड र इटालीबीचको खेल खेलाईसकेका छन् । युरोकपको फाइनलमा इंग्ल्यान्ड र इटाली भिड्ने छन् । आइतबार राति हुने फाइनल खेल वेम्बली स्टेडियममा हुनेछ । फाईनल खेलमा ईटालीका खराब समर्थकहरुले केही गर्ने हो कि भनेर आम दर्शकलाई चिन्ता रहेको छ । यसअघि पनि ईटालीका समर्थकहरुले कैयौ पटक मैदानमै बिभिन्न हर्कत गर्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४९ र संक्रमितको संख्या ५५७७ पुग्याे
समाज प्रति योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई सम्मान
भ्रष्टचारीलाई कारबाही र आर डि टि रोक्न माग गर्दै काँग्रेसद्धारा विरोध सभा